Malunga nathi - SHANDONG ZIBO YIHAOJIA AUTO PARTS CO., LTD
Zibo Yihaojia Auto Iintetho Co., Ltd.
Zonke iimveliso zethu zephedi yokuqhekeza zigqithile kwi-ISO / TS16949: imigangatho ka-2009 kunye ne-AMECA yokuthanjiswa.
Yintoni i-Brake Pad?
Ipeyinti yokuqhekeza, elona candelo libalulekileyo lokhuselo kwinkqubo yokuqhekeza iimoto, edlala indima enkulu kuwo onke amandla okumisa.
Iipads zebreyiki ngokubanzi zenziwe ngeplate exhasayo, izingxobo zokuncamathela kunye neebhloko zentsokotho, ezibandakanya izinto zokudlulisa ubushushu ezingezizo ngeenjongo zokugquma.
Ibhloko yokuxubana yenziwe ngezinto zokuxubana kunye nokuncamathela, okucinezelwe kwidisk yokuqhekeza okanye igubu lokuqhekeza ukuvelisa ukungqubana, ukuze kufezekiswe injongo yokunciphisa ukubola kwesithuthi.
Ngenxa yokuxubana, iibhloko zochuku ziya kunxiba ngokuthe ngcembe, Ukuba izinto zokuxubana zigqityiwe, iphedi yokuqhekeza kufuneka itshintshwe ngexesha, kungenjalo ipleyiti exhasayo kunye nediski yokuqhekeza iya kuba nokunxibelelana ngokuthe ngqo kunye nokuya kuthi ekugqibeleni kuphulukane isiphumo brake kunye nokonakala disc brake.
I-SHANDONG ZIBO YIHAOJIA AUTO PARTS CO., LTD yinkokheli yeepads eziziqhobosheleyo ezifumaneka kwisiThili saseZhangdian, kwisiXeko saseZibo, kwiPhondo laseShandong .Yimveliso yeepads zokuqhekeza iimoto kwaye yasekwa ngo-2001.
Ngaba i-auto brake pads yokuvelisa Inkampani kwiZibo, kwiPhondo laseShandong.
Inkampani ineminyaka engama-20 yembali yophuhliso, ukuqhubekeka kunye nemveliso yokufaka iilebheli ye-OEM kangangeminyaka eli-15.
Uphando kwaye waphuhlisa i-non-asbestos, i-semi-metal, i-metal encinci kunye ne-ceramic formulation njl.njl.
Zonke iimveliso zethu zokuqhekeza ziye zadlula kwi-ISO / TS 16949: imigangatho ka-2009 kunye nokuqinisekiswa kwe-AMECA.
Sisebenzisa izinto ezisemgangathweni ophezulu zokungenisa ngaphakathi kunye nezasekhaya ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Izibonelelo zethu zemveliso zibandakanya ukumisa okungcono, ukumelana nokunxiba okuphuculweyo, kwaye akukho luvuthulula nengxolo.
Imveliso yokukwazi ukufumana iiseti ezizizigidi ezi-3, nangaphezulu kweemodeli zemveliso ezingama-2000, indawo yokusebenzela esevenkile yeemitha ezili-16000.
Umthamo wemveliso yeeseti ezizigidi ezi-3
neemodeli zemveliso engaphezulu kwama-2000
Indawo yokusebenza yeevenkile ezibandakanya isikwere seemitha ezili-16000.
Inkampani ineminyaka engama-20 yembali yophuhliso
ukuqhubekekiswa kunye nemveliso yokuphawula i-OEM kangangeminyaka eli-15.